Yedzidzo Essay muZimbabwe
Yako yega Yedzidzo Nyaya pasina kubhadhara kwakavanzika. Raira muZimbabwe tsika dzakatemwa kubva kuUK uye US vatauri vemo. 24/7 Tsigiro, Mahara Dzokororo uye yemhando yepamusoro inoshanda munguva pfupi
Maitiro Ekunyorera Chidzidzo cheChidzidzo
Ongororo zhinji dzedzidzo dzinoteedzera chaiyo seti yemirairidzo. Kana iwe uri pasi pezvipingamupinyi zvenguva yekurangarira mashoma mashoma emitemo yekunyora rondedzero zvinokubatsira iwe kuburitsa inonyengetedza, mapepa ekutanga.
Mutemo wekutanga: Iyo rondedzero iwe yaunonyora inokwanisa kukwanisa kumira wega pasina mareferenzi kana kunongedzera kune mamwe mabasa emunyori mumwe chete. Iwe unofanirwa zvakare kurega kuita chero shanduko yekuchinja mumuviri webepa rako uye panoperera chinyorwa. Izvi zvinongogona chete kuita kuti zvinyanye kunakidza kune avo vanoiverenga, uye zvakare zvinokonzeresa nyonganiso yekuti ndiani akanyora chii uye riini.
Imwe yemakanganiso akajairika kuitwa kugadzira chirevo chetsananguro isina humbowo hwekutsigira. Kana iwe ukaita chirevo chakadai, vaverengi vanoshamisika kana maonero ako akavakirwa pazvinhu chaizvo, uye kuti wakasvika sei kwavari. Iwe zvakare zvichakuwana zvakaoma kuratidza kune vaverengi vako kuti nei chirevo chako chechokwadi chiri chechokwadi, sezvo chirevo chako chetsaiti chingangonzwika sezvakanaka murondedzero, asi uchinyepa zvachose mukuita. Kana chirevo chako chetsananguro chinonzwika senge hunhu chete, uye chisiri chokwadi chakanyatso tsvagiswa, saka wabudirira mukuita kuti vaverengi vako vabvunze ruzivo uye ruzivo rwako.
Imwe mhosho yakajairika ndeye kushandisa kamwe chete muchinyorwa uye kushandisa chirevo icho sekupokana kwako kwese kwechidimbu. Iwe unogona kusanganisira imwe chitaurwa mumuviri wenyaya yako, asi usamboshandisa kota yako imwechete sehwaro hwako hwese hwekupokana. Muchokwadi, iwe haufanire kusanganisira yako imwechete quote zvachose. Panzvimbo iyoyo, iwe unofanirwa kushandisa imwe quote kuti utsigire yako yakakosha pozoisa yechitatu quote yekutsigira yako yechipiri poindi.
Kanganiso yekupedzisira, kana uchinyora rondedzero yepfungwa, iri kushandisa imwecheteyo kota. Kunyangwe iwe uchifanira kusanganisira yako nharo huru mune imwe neimwe yekoteti, haufanire kushandisa imwecheteyo kota yakadzokororwa mune yako chinyorwa. Usashandise anopfuura mumwe chete muenzaniso wechetesheni imwechete. Muverengi anofanira kugara achiziva kuti urikudoma zvinopfuura imwechete sosi, uye kuti iwe unotenda kuti pane inopfuura nharo imwe muchidimbu.
Paunenge uchinyora rondedzero yepfungwa, haufanire kuratidza chero chinhu. Chinangwa chako chikuru kufadza vateereri vako, uye kuvaita vafunge nezvenyaya. Chinangwa hachisi che 'kuratidza' chimwe chinhu, asi kuti kumutsa kufunga kana kunetseka mavari.
Shandisa makotesheni zvishoma uye ita shuwa yekutarisa iwo ese achipikisana. Zviri nyore kwazvo kushandura mashoma mazwi uye nekusiya makotesheni mashoma akajeka. Ita shuwa kuti iwe unoshandisa yakakodzera nyora, girama uye chimiro chemitsara. Kana zvasvika kune zvinyorwa, iwe uchazoda kudzivirira kushandiswa kwemashoko ezasi uye endnotes.
Sezvauri kuona, maitiro ezvinyorwa zvinyorwa anyore ari nyore, asi iwe uchiri kuda kushandisa iyi yakapusa mitemo kuti uchengete chinyorwa chitsva, chinonakidza kuverenga. Kana iwe uchikwanisa kuita kuti zvinyorwa zvinakidze, une chokwadi chekushandisa zvakanyanya kubva kune urwu rwakaoma rudzi rwekunyora kudzidza.
Kana iwe uchifarira kunyora chinyorwa chedzidzo icho chinokanganisa zvachose muverengi, ungangoda kufunga nezve kuhaya nyanzvi kuti ikunyorere iwe. Kune vanyori vanoverengeka vanozvimiririra avo vanopa masevhisi avo pamubhadharo, uye ivo vakave vanyori vakaratidza vanoziva zvavari kutaura nezvazvo kana zvasvika pakunyora rondedzero yekunyora.
Kana iwe ukafunga kusarudza kuhaya nyanzvi yekunyora rondedzero munyori, kumbira masampuli ebasa rapfuura. Ivo vanozogona kukupa iwe imwe nzwisiso yekuti vanoita sei nezvebasa ravo, pamwe nekukupa iwe pfungwa pane dzerudzii rwenyaya dzavanofarira kutora muzvinyorwa zvavo. Uye zvakare, ivo vanokwanisa kukwanisa kupindura chero mibvunzo iwe yaungave unayo maererano neyekudzidza rondedzero yekunyora maitiro.
Kuti upedze nyaya yako, usakanganwa kuiongorora zvakanaka. Chinhu chekupedzisira chaunoda kuita kuita chikanganiso icho chinosiya vaverengi vako vachifunga kuti rondedzero yako ndeyekushupika uye haina kurongwa. Kuongorora basa rako usati waritumira kunogara kuri kuchenjera kufamba.
Rangarira kutora nguva yako uye uteerere maitiro ekunyora ezvidzidzo, uye kana usina chokwadi chekuti rondedzero yako yekunyora yakanyorwa zvakanaka, usazvidya moyo. Izvo zvinokwanisika kunyora inonakidza poindi rondedzero.